शीर्षक, प्रचण्डकी बुहारी - Dainik Nepal
विनोद ढकाल २०७६ मंसिर ७ गते १२:२५
आजभोलीका समाचारका हेडलाइन देखेर प्रश्नले घोच्नु स्वभाविक बनिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका विषयमा कतिपय सन्तुष्ट छैनन् । कतिपयका आफ्ना मत होलान् । कतिपयका आफ्नै मुल्यांकन । स्वमुल्यांकनको जगमा उभिएर आफ्नो निर्णयलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गर्दा, अनलाइन न्युज पोर्टलमा अभिव्यक्त गर्दा कसैको मानमर्दन वा मानलाई नै ‘अप’ गरिदिने प्रचलन बढ्यो ।
जस्तो एउटा हेडलाइन (शीर्षक)– कार्यसम्पादनमा अब्बल गोकर्ण फालिए, फेल भएकी प्रचण्ड बुहारी दोहोरिइन् ।
यो समाचारभित्रका तथ्य र प्रस्तुतीका आधार र प्रमण होलान् । हेडलाइनले समाचारलाई कति न्याय ग¥यो त्यो एउटा विषय होला तर त्यसले कतिको कसरी मानमर्दन ग¥यो यसमा शव्द केलाउन आवश्यक ठानें । नातामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र खानेपानी मन्त्री बिना मगर ससुरा बुहारी हुन्, दुनियाँलाई पत्तो भएको कुरा हो । तर यीनको आफ्ना स्वतन्त्र परिचय र जिम्मेवारी छन् । प्रचण्ड वा बिनालाई परस्पर बनाएर लेखिनुको अर्थ नेकपा बिनाले र खानेपानी मन्त्रालय प्रचण्डले चलाउने अर्थ पनि लाग्छ । यस हिसाबले प्रचण्डलाई खानेपानी मन्त्री या बिनालाई पूर्वप्रधानमन्त्री जोडे पनि त हुने भएछ नि !
यो खुकुलो तर्कमा अडिनु हुँदैन । यो उदाहरण हो । राजनीतिभित्र सम्बन्ध र प्रभावका छायाँ कति छन् त्यो नेपथ्यमा नै हुन्छ । अनुमानित विषयलाई तथ्यगत प्रस्तुती भन्न सकिँदैन । तर यस्ता मसिना कुराले कसैको अस्तित्व जोडेर हेडलाइन बनाउनुलाई पत्रकारिता मान्ने कि के मान्ने ? जसको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन, उसलाई भन्न सकियो । सार्वजनिक जीवन छैन, उसलाई जोड्न सकिएला ।
अर्कोचाहिँ बिना मगर प्रचण्डको बुहारी भएकै कारणले मात्र मन्त्रिपरिषद्को सदस्यमा कायम भएकी हुन् त भन्ने प्रश्न छ । यो कत्तिको सत्य हुनसक्छ ।
बिनालाई प्रचण्डकी बुहारी भन्दै गर्दा, गगन थापालाई अर्जुननरसिंह केसीको ज्वाँई भनी कतिजनाले लेखेको छ ? सुजाता कोइरालालाई गिरीजाप्रसादकी छोरी भनी कतिले अस्तित्व दिएको छ ? प्रकाशमान सिंहको समाचारमा कतिले भनेका छन्– गणेशमानको छोरो ?
प्रचण्डले बारम्बार भनेका छन्– सरकारको काम र कार्यक्षेत्र प्राधिकार प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा आधारित हुन्छ । उहाँको कार्यक्षेत्र हो । सचिवालय बैठकले त यसलाई आधिकारिक निर्णय नै गरिदियो । तैपनि खानेपानी मन्त्री बिना मगर हट्नु या नहट्नुको हेडलाइनको शीर्षक प्रचण्डकी बुहारी भनेर किन झोसिन्छ होला ? बिना मगर मन्त्री भएका कारण, उनको आफ्नै अस्तित्व, कमजोरी र सवल पक्ष होलान्, त्यसलाई केलाउनु उपयुक्त होइन र ?
राजनीतिक अस्तित्व सबैको हुन्छ । बिनालाई प्रचण्डकी बुहारी भन्दै गर्दा, गगन थापालाई अर्जुननरसिंह केसीको ज्वाँई भनी कतिजनाले लेखेको छ ? सुजाता कोइरालालाई गिरीजाप्रसादकी छोरी भनी कतिले अस्तित्व दिएको छ ? प्रकाशमान सिंहको समाचारमा कतिले भनेका छन्– गणेशमानको छोरो ? नियतका आधारमा, निचोड निकाल्नु, त्यसको शीर्षक चयन गर्नु समाचार बिकाउको कारक मात्र हुन्न, नियति निम्त्याउने विषय हुन्छ । जसको अस्तित्व स्वतन्त्र बनेको छ, जिम्मेवारी दिइएको छ उसको अस्तित्वको पनि प्रचार हुनुपर्छ । उसका सफलता र राम्रा काममा अस्तित्व दिने अनि, अलिकति खराब जस्तो देखियो वा आलोचना गर्नुप¥यो भने राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहेका व्यक्तिमाथि गरिने प्रहारलाई छद्मभेषी, गुरिल्ला आक्रमण नै भनिन्छ । शव्दवाण गुरिल्ला हुन थाल्यो भने लेखनको अस्तित्व नै प्रश्नमा अड्किन्छ ।
प्रचण्ड त्यो आयाम हुन् जसले आधुनिक राजनीतिको जगमात्र बसालेनन् बर्षौंसम्म पीडामा रहेका आमसाधारणको आक्रोशलाई बन्दुक, बारुद, विचारमार्फत अभिव्यक्त गराउने प्रशिक्षण गरे । समानताको आवाज बुलन्द बनाउन सिकाए । आज भुगोलदेखि क्षेत्र र जातीका प्राधिकारमात्र होइन, समान उपस्थितिको समानुपातिक प्रणालीलाई स्थापित गराए । तैपनि उनका एकाध कमजोरीका नाममा समग्र राजनीति धुमिल बनाउने कुण्ठालाई परिवारका सदस्यसँग जोडेर बदनाम गराउन खोज्नेहरूको लावालस्कर लागेकै छन् । यो एउटा सुखद प्रमाण पनि हो । जबसम्म प्रचण्ड छन्, राजनीतिको केन्द्रविन्दु उनको ताकतमा नै घुमिरहन्छ भन्ने ।
प्रचण्ड आम भन्दा अलिक फरक किन छन् भने राजनीति थालेको ३० बर्षमा २४० बर्षको विरासत ढाल्ने प्रशिक्षण, गठजोड र जनआन्दोलन गर्न गराउन सफल भए । लोकतान्त्रिक मान्यता राख्ने तर श्री ५ समेत मानेर सत्ताको वरिपरि हिँड्नुको विकल्पको नेपाल हुनसक्छ भन्ने परिकल्पनाधारी हुन् प्रचण्ड । प्रचण्ड व्यक्ति पनि हुन् उनका नीजि कमजोरी छैनन् भन्ने होइन । तर, उनलाई नियत र नियतीको आँखाले होइन, आम साधारणको आँखाले व्याख्या गर्नुपर्छ । आखिर व्यक्तिगत जीवनका कमीकमजोरी, पीडा र स्वार्थ हर व्यक्तिले पालेकै छ । भित्री मनलाई गएर कसैले विचरण गरोस् ।
इजाजत प्राप्त हतियार १० गतेभित्र बुझाउन गृह मन्त्रालयको आग्रह
धादिङमा जन्ती बस दुर्घटना एकको मृत्यु, ४० घाइते
संसद भवन अगाडी सवारीको ठक्करबाट क्षतविक्षत अवस्थामा शव फेला
दुई लाख नेपाली पासपोर्ट इन्टरपोलको रेकर्डमा, वार्षिक २३ हजार पासपोर्ट हराउछन्